ट्याग: इन-स्टोर शपिंग | Martech Zone
ट्याग: इन-स्टोर शपिंग
बजारहरू: यी व्यवहारलाई केन्द्रबाट बेलायती खरीदका लागि चिन्नुहोस्
बिहीबार, सेप्टेम्बर 7, 2017 बिहीबार, सेप्टेम्बर 7, 2017 Douglas Karr
मैले त्यहाँ के गरेको देख्यौ? यस मिडवेस्टर्नरले व्यवहारको सट्टा ब्रिटिश हिज्जे व्यवहारको प्रयोग गर्‍यो। म केवल म कति सांसारिक छु भनेर सबैलाई प्रमाणित गर्न चाहान्छु… वा हैन। मेरो आमाको परिवारको पक्षमा स्कटिश र बेलायती सम्पदाको बावजुद म वास्तवमा कहिल्यै युनाइटेड किंगडम गएको छैन। (त्यो हेर्नुहोस्? मैले यो फेरि गरेँ!) ठीक छ, हास्य एकातिर (दोहो!), यो सीएम ब्रान्डले क्याप्चर गरेको केही उत्कृष्ट जानकारी हो। म वास्तवमै यो विश्वास गर्दछु